weerar Heart misdiagnosed sida walaaca dumarka - Rule News
weerar Heart misdiagnosed sida walaaca dumarka
Haweenka waxay u badan tahay in ay u dhintaan wadne, sababtoo ah calaamadaha ay inta badan misdiagnosed sida walwalka si aanay u hesho daaweyn deg deg ah muhiim, ayaa sheegay in baadhitaan Monday.
Cilmi biiray Jaamacadda McGill ee Montreal ka soo baxay si ay u fahmaan kala duwanaanshaha jinsiga ee heerka dhimashada ragga iyo dumarka la ba'an syndrome coronary.
Waxay weydiiyay 1,123 bukaanada da'doodu tahay 18 in 55 inaad buuxiso baadhitaan ka dib markii uu qirtay in mid ka mid ah 24 isbitaalada ee Kanada, mid ka mid ah Maraykanka iyo mid ka mid ah Switzerland.
Haweenka The daraasadda, cilmi ka heleen, guud ahaan ka qaansada dakhliga hoose yimid, waxay u badantahay inay qabto cudurka macaanka, cadaadiska dhiigga ee sareeya iyo taariikh qoys ee cudurka wadnaha a.
Waxay sidoo kale lahaa heerarka wayn sare ee walaaca iyo diiqadda ka raggii.
Cilmibaadhayaasha ayaa sheegay in rag ka helay dhakhso si electrocardiograms helaan (eCGs) si loo hubiyo garaaca wadnaha iyo fibrinolysis si looga hortago xinjiro dhiig badan haween ah.
daaweynta Hore ee wadne looga hortagi karaa ama la xaddido waxyeello muruqa wadnaha ee, halka lagu badbaadinayo nolosha qofka.
Celcelis ahaan qabsaday 15 daqiiqo iyo 28 daqiiqo, siday u kala horreeyaan, waayo, raggii waxay la siiyo ECGs ama fibrinolysis ka markii ay yimaadeen at qolka deg-deg ah.
Marka la barbardhigo, way qabsadeen 21 daqiiqo iyo 36 daqiiqo loogu talagalay haweenka.
Cilmibaadhayaasha ayaa tilmaamay in heerarka sare ee walaaca haweenka ee sida sababta aasaasiga ah ee farqi ah.
“Bukaanka qaba walwalka kuwa soo bandhigaan waaxda gurmadka la xabad xanuun aan wadnaha waxa ay noqon dumarka, iyo baahsanaanta ee ba'an syndrome coronary ka mid ah haweenka dhallinyarada ah ka hooseeya ka mid ah ragga dhallinyarada ah,” ayaa sheegay in cilmi-Louise Pilote.
“Natiijadu waxay soo jeedinayaan in shaqaalaha kala-sooca hore ka qaadista laga yaabo dhacdo wadnaha ka mid ah haweenka dhalinyarada walwalka, taas oo keeni lahaa in bareeg dheer albaab-ilaa-ECG.”
Natiijooyinka ayaa lagu daabacay in arrinta hadda ee ururka Medical Journal ee Canada.
23354	2 Xiisad syndrome coronary, Canada, Ururka Medical Journal Canadian, Electrocardiography, McGill University, Montreal, Wadnaxanuun myocardial infarction, United States
← Crimea leeyahay xornimada ka Ukraine Japan saamiyada Display keeno Stamford Bridge on ugu horeysay ee Tokyo →